Eden Hazard Oo Laba Shardi Ku Xidhay In Uu Real Madrid Ku Biiro Iyo Hal Shuruud Oo Ka Cadhaysiin Karta Ramos, Modric Iyo Benzema. - Gool24.Net
Eden Hazard Oo Laba Shardi Ku Xidhay In Uu Real Madrid Ku Biiro Iyo Hal Shuruud Oo Ka Cadhaysiin Karta Ramos, Modric Iyo Benzema.
Kooxda Real Madrid ayaa doonaysa in ay dhamaadka xili ciyaareedkan la soo saxiixato xidiga ay waqtiga dheer isha ku haysay ee Eden Hazard kaas oo isaga laftiisu diyaar u ah in uu Santiago Bernabeu ku rumeeyo riyadiisa ah in uu maalin uu ka ciyaaro kooxda Los Blancos.
Laakiin waxaa soo baxay laba shardi oo uu Eden Hazard ku xidhay maamulka kooxda Real Madrid si uu uga baxo kooxdiisa Chelsea oo uu Madrid ugu soo biiro. Eden Hazard ayaa marar badan sheegay sida uu u doonayo in uu Real Madrid ka ciyaaro.
Heshiiska Eden Hazard ayaa galaya sanadkii ugu daneeyay marka la soo gaadhay June 30,2019 taas oo maamulka kooxda Chelsea ku qasbi karta in ay iska iibiyaan xidiga reer Belgium halkii uu si xor ah kaga bixi lahaa maadaama oo uu ilaa hadda diiday in uu wax qandaraas cusub ah u saxiixo Chelsea.
Waxaa hadda soo baxay war sheegaya in Eden Hazard uu maamulka Real Madrid hor dhigay laba shuruudood oo dhinaca lacagta ah wuxuuna doonayaa in marka hore la siiyo lacag 15 milyan yuro ah taas oo ah lacag uu ku doonayo sababta in uu diiday heshiiskii cusbaa ee Chelsea oo uu kooxda Madrid ku soo biirayo.
Inta badan kooxaha ayaa ciyaartoyda lacag ku siiya marka ay diidaan in ay heshiisyo cusub u saxiixaan kooxahooda, wuxuuna Hazard dalbaday in €15 milan lacag ah lagu siiyo go’aanka uu ku doonayo in uu Chelsea kaga baxo ee uu Madrid ugu biiri karo.
Laakiin shuruuda labaad ayaa ah mid aan sahlanayn oo kala qaybsanaan ku keeni karta qolka labiska Real Madrid gaar ahaan ciyaartoyda ugu muhiimsan ee Sergio Ramos, Luka Modric iyo Karim Benzema wuxuuna Hazard doonayaa in sanadkii mushaar ahaan loo siiyo 17 milyan yuro taas oo ka dhigi karta xidiga ugu musharka badan Los Blancos.
Sida ay wararku sheegayaan, in Hazard uu dalbaday lacag 17 milyan yuro ah oo sanadkii uu mushaar ahaan uga qaadan karo Real Madrid ayaa haddii ay maamulka Madrid aqbalaan waxay ka cadhaysiin doontaa xidigaha ugu muhiimsan Madrid ee kooxda waqtiga dheer joogay kuwaas oo aan jeclaysan doonin in xidig kooxda ku soo biiray uu ka mushaar qaalisanaado.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid iyo Eden Hazard ayaa la filayaa in ay wada xaajoodyo badan yeelan doonaan iyada oo la filayo in Florentino Perez uu wax walba u samayn doono in uu xidiga reer Belgium keeno Bernabeu.